हामी किन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयौं ? : घनश्याम भुसाल - DURBAR TIMES
HomePoliticsहामी किन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयौं ? : घनश्याम भुसाल
हामी किन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयौं ? : घनश्याम भुसाल
काठमाडौं : एमाले नेता घनश्याम भुसालले संसद विघटनको ठीक वा बेठिक भन्नेमा पर्याप्त छलफल नभई हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएका छन् । पटकपटक अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरुले बाध्यात्मक रुपमा हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन् । भुसालले पटकपटक सहमतिको प्रयास गरे पनि अध्यक्षबाट धोका मात्रै पाएको बताएका छन् ।
भुसालले भने “फागुन २८ मा केपी ओलीले वस्तुतः पार्टी विभाजनको घोषणा गर्नुभयो, त्यसकारण हामीले एकताको कुरा गर्‍यौं । र, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्‍यौं । त्यसबाट एकताका लागि हाम्रा प्रस्ताव अगाडि सार्‍य‍ौं । त्यसलाई ओलीजीले एकपछि अर्को गर्दै दुत्कार्दै, बद्नाम गर्दै जानुभयो । पछिल्लो दिनमा उहाँले फेरि संसद् विघटन गर्नुभयो । संसद् विघटन संसद्‍माथि र संसद्‍मार्फत् संविधानमाथिको आक्रमण हो भन्ने हामीलाई लाग्यो । पुस ५ गतेको विघटनको अर्कोरूपमा यो आयो भन्ने लाग्यो । त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण हैसियतलाई दाउमा राखेर संसद् बचाउनका लागि उपाय खोज्यौं । र, शेरबहादुर देउवालाई समेत समर्थन गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । त्यसपछि पनि हामीले संसद् विघटन गर्नु गलत थियो तर पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ भन्यौँ । त्यो भनेको अदालतको निर्णयअनुसार जेठ २ मा जानुपर्छ भन्दै आयौं ” ।
आज जेठ २ मा जाने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ । तर त्यो पनि खुला दिलले भन्नुभएको छैन । जेठ २ मा जाने हाम्रो माग, देशको राजनीतिक आवश्यकताले भन्दा पनि उहाँलाई अदालतले त्यहाँ पुर्‍याइदिएकोजस्तो गर्नुभएको छ । उहाँले अझै महसुस गरेजस्तो देखिँदैन । तर, अदालतले निर्णय गरिसकेपछि जे हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरौंला, जेठ २ मा जाऔं भन्नेमा अनौपचारिक तहबाट सहमति गरेका थियौं । त्यसपछि छलफल सुरु गर्‍यौं । आठ–दस चरण नै छलफल भयो । तर, उहाँहरू क्रमश: त्यसबाट पनि पछि हट्नु भयो । त्यसपछि उहाँहरूले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता शर्त ल्याउन थाल्नु भयो । त्यसले गर्दा यो रोकियो । अहिले गतिरोधमा नै छ । अहिले भएका भेटघाट गतिरोध फुकाउने कोसिस हुन् ।
हामीले भनिसकेका छौं, संसद् विघटन गर्नु ठिक वा बेठिक भन्ने छलफल नभई हस्ताक्षरको कुरा गर्नु गलत हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । किनभने यत्तिकै हस्ताक्षर आएको होइन । उहाँले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । संसद् विघटन गर्नु गलत हो । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउन अविश्वास प्रस्ताव लैजाने या त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मनमौजी तरिकाले संसद् विघटन गर्ने विगत थियो । त्यही कारणले गर्दा हामी राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट गुज्रेका थियौँ । स्थीरताका लागि अहिलेको संविधानमा नयाँ प्रावधान राखेका थियौं । लोकतान्त्रिक स्थीरताका साथ मुलुकले बाँच्नुपर्छ भनेर सोच्ने कुनै पनि नेपालीले नगर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । त्यसअर्थ हामीले हस्ताक्षरको कदम उठाएका हौं ।
Previous articleकांग्रेस अधिवेशन : अघि बढे देउवा
Next articleसंकटमा पूर्व महामन्त्री सिटौला